विचार/ब्लग Archives - नागरिक रैबार
अनावश्यक थोपरिएका करहरूमा कुनै पुनर्विचार नगरी सरकारले खालि एकोहोरो रूपमा एकपछि अर्को ‘कीर्तिमान’ राख्ने गरी इन्धनको मूल्य बढाएको–बढायै छ । पेट्रोलमा मात्रै ११ महिनायता ७८ रुपैयाँ भाउ बढाइएको छ । पछिल्लो समय एक साताको अन्तरमै पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा दोहोर्‍याएर १०–१० रुपैयाँ थपिएको छ । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८०, डिजेल र मट्टीतेलको १६३ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । खाना पकाउने […]
म प्रश्‍न गरूँ कसोरी ?
म्यागसेसे विजेता भारतीय पत्रकार रवीश कुमारले हालै काठमाडौंमा भनेका थिए— सम्झौता र अन्तरविरोधप्रति अहिलेदेखि चनाखो हुनुहोस्, नत्र पेसा (पत्रकारिता) नै गायब हुनेछ । हो, यसरी भन्नलाई सजिलो छ । अहिलेलाई सुरु गरौं— भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राको शुक्रबार अपराह्न दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनबाट । क्वात्रा, जो एक महिनाअघिसम्म नेपालका लागि भारतीय राजदूत थिए र अहिले भने बुद्ध जयन्ती (सोमबार) […]
यतीबेला देश चुनाबी माहोलमा छ । यो माहोलमा उम्मेदवारहरु आफ्नो प्रचारप्रसामा ब्यस्त छन् । चुनाबी प्रचारप्रसारमा पुरुषलाइ त केहि अप्ठ्यारो हुँदैन तर महिलालाइ भने साह्रै अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । महिला उम्मेदवारहरुलाइ प्रचारप्रसारको दौडधुप एकतिर हुन्छ भने घरको कामधन्दा अर्कोतिर । किनभने महिला उम्मेदवार महिलाले चुनाबी प्रचारमा मात्रै नभएर अन्य सबै क्षेत्रको काममा सबै घरको […]
दलित महिलाको प्रतिनिधित्वमा दलहरूको अक्षमता
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ ले मुलुकका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा एक महिला सदस्यका अतिरिक्त एक दलित महिला सदस्यका लागि पनि सिट आरक्षित गरेको छ । यसबाट वडा–वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित मात्र भएको छैन, स्थानीय राजनीतिमा उनीहरूको सहभागिता पनि व्यापक रूपमा बढेको छ । परन्तु, कानुनी सुनिश्चितताका बावजुद कतिपय वडामा भने कुनै पनि राजनीतिक […]
चलनचल्तीका पुँजीवादी र कम्युनिष्ट पार्टीभित्र दलित समुदायको हविगत !
जातवार्ता पढ्दा र पुँजीवादी चुनावमा गुमनाम तरिकाले होमिएको मेरो समाज अध्ययन गर्दै गर्दा – लोकतान्त्रिक भनिने पार्टी र प्रचलित कम्युनिष्ट पार्टीमा दलितको हैसियत यति किन कम्जोर छ र यो हविगत हुँदैछ ? र, आज दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गोरख शार्कीले हिमाली गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि स्वतन्त्र उमेदवारीको प्रचारमुलक ग्राफिक्स फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिरहँदा लेखेको […]
सयौं सिंहदरबारका मालिकहरूका विपक्षमा
म अहिले एकसाथ निराश, दुःखी र क्षुब्ध छु । म काठमाडौंमै छु तर मेरो मन उडेर देशका कुनाकन्दरामा कहराइरहेका नागरिकहरूको पीडामा पुगेको छ । हालै प्यूठानबाट दैलेख हुँदै हुम्लासम्म पुगेर गाउँहरूमा स्वयंसेवा गर्दा मैल जे देखें, त्यसले मलाई अशान्त तुल्याएको छ । यस पटक र यसअगाडि मैले देशभरका अरू धेरै जिल्लामा यात्रा गर्दा भेटेका दर्जनौं पीडाका कथाहरूमध्ये एउटाबाट […]
‘पिर’ले देखाएका अनेक ऐया
केही दिन अघि मात्र प्रकाश सपुतको ‘पिर’ शीर्षकको गीत सार्वजनिक भएपछि जनजिब्रोमा झुण्डिएको मात्र छैन, यसले नेपाली समाजमा हलचल नै ल्याएको छ । गीतले माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र संघर्षमा सक्रिय सहभागी भएका तर उक्त पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बेवास्तामा परेको अनुभव गरेका लडाकुहरूको व्यथालाई बलियो आवाज दिएको छ । यसले मानिसहरूलाई रुवाएको मात्र छैन, व्यापक राजनीतिक […]
नेतृत्व चुन्ने अवसर मतदाताको: तर आबश्यकताको कि बाध्यताको ?
स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ मा गर्ने घोषणा भई सकेको छ । उम्मेदवार को बन्ने ? कस्तो बन्ने ? भन्ने बिषयमा चोकचोकमा कुराहरु चलिरहेका छन् भने सबै पार्टीले स्थानीय तहहरुमा प्रचार प्रसारका गतिविधि बढाईरहेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म २१ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक, सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा […]
‘पीर’ : जनयुद्धको आलोचना कि सचेतना ?
भर्खरै युट्युवमा रिलिज भएको प्रकाश सपुतको नयाँ गीत ‘पीर’ विवादमा आएको छ । कसैले यसलाई १० वर्षे जनयुद्धका लडाकुसहित सिंगो नेपाली समुदायको यथार्थ भन्दै प्रशंसा गरिरहेका छन् भने कसैले परिवर्तनका लागि भएको माओवादी जनयुद्धलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको र नारी अस्तित्व माथि औँला उठाएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । गीतको आलोचना वा प्रशंसा गर्नु […]
बन्दक बनेको समृद्धि ! इन्द्र बोहरा
केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुरुप विकासका नयनले उपत्यका नेतृत्वमा पहुँच भएको स्थान बाहेक अन्य काहीं देखेन। २०७२ असोज ३ गते संघीयता समाबेशिता सहितको नेपालको संविधान निर्माण पछि सिंगो मुलुक संघ,प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा हुमियो। सर्वसाधारणको दैलोदैलोमा सिंहदरवार पुग्ने कुराले एक खालको हर्ष उल्लासमय छाएको थियोे । वि सं २०७४ मा स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेले देशै भर […]
आज हामी ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै छौँ । मार्च ८ को नारी दिवस मनाइरहँदा हामी आजको दिन नै लैंगिक समानताको व्यापक पैरवी गर्छाैं । आजको दिनले नारीविरुद्ध अपमान, हिंसा र असमानताबारे कडा प्रतिवाद गर्न नारीहरूलाई जागरुक पनि बनाउँछौँ । महिलाले आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै संघर्ष गरेको एक शताब्दी भइसक्यो । […]
हिंसा भयो भन्न डराउनु पर्ने समाजमा ‘नारी दिवस’ कसरी मनाउने ?
आज ८ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस विश्वभर मनाइदैछ । यो दिवस महिला जागरूकता सम्बन्धी दिवस हो । सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा हामीले ११२औँ नारी दिवस मनाइरहेका छौँ । नेपालमा महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउने प्रथम महिला योगमाया न्यौपाने हुन् । उनले वि.सं १९९८ मा आफ्ना अनुयायीसहित परिवर्तनका लागि खबरदारी गर्दै जल समाधि लिएकी थिइन् […]
छोरी, तिमीले आफ्नै आँखामा सपना देख्न सक्नुपर्छ
छोरी, तिमी आज दुई वर्ष पुरा भएकी छौ । तिमी दिनदिनै हुर्किरहेकी छौ । हरेक दिन तिम्रा हुर्काईका फरक फरक क्रियाकलाप देखेर म दंग पर्छु । अहिले तिमी राम्रोसँग हिँड्न सक्ने भएकी छौ । तिम्रो क्षमताले भ्याएसम्म सबै शब्दहरु उच्चारण गर्न सक्ने भएकी छौ । छोटा र सरल वाक्याशंहरु बोल्न थालेकी छौ । अव विस्तारै […]
धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ !
पत्रकारिता भनेको फगत राजनीतिक परिघटनाको वर्णन मात्र होइन । पत्रकारिताले समाजका सबै खाले बहस र अवयवहरूलाई समेट्न सक्नुपर्छ । समाजमात्र होइन, वातावरण र भूगोल पनि पत्रकारिताको विषयवस्तुभित्रै पर्छ । यही परिधिलाई मध्यनजर गर्दै यहाँ नेपाली समाजमा चल्न थालेको ‘यौन स्वतन्त्रता भर्सेस अनुशासन’ का विषयमा थोरै बहस गर्ने प्रयास गरिएको छ । हालै प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमा […]
संसारको गति प्रेममै निर्भर छ । प्रेमबिना मानिसका प्रयासहरु व्यर्थ छन् । प्रेमबिनाको जीवन एकाकी, नीरस, अर्थहीन र अधुरो हुन्छ । प्रेम आफैंमा गहन र जटिल विषय हो । प्रेमका सम्बन्धमा संसारभर विविध विचार र चिन्तन उपलब्ध छन् । अहिंसावादी विचार र ज्ञान प्रवाह गरेर मानव जातिमै पृथक प्रभाव छोडेका गौतम बुद्धले भनेका छन्, ‘अन्तत: […]
शहीद : को हुन्, को हैनन् ?
आज माघ १६ गते अर्थात् शहीद दिवस । देश र जनताको हित अनि अधिकारका लागि जीवन त्याग गर्ने शहीदप्रति श्रद्धा र सम्मान गर्दै देशभर शहीद दिवस मनाइँदैछ । यो दिन देश र जनताका लागि आफ्नो जीवनकै बलिदानी दिने ती महान् शहीदलाई सम्झिने र उनीहरूले देखाएको सत्मार्गमा लाग्ने प्रण गर्ने दिन । देश र जनताको सुन्दर […]
‘बाँचेका एलबीहरू’को चित्कार !
‘मर्नेहरु सम्झना छोडेर जान्छन् । तिनका वियोगमा बाँच्नेहरुलाई पो गाह्रो हुन्छ । मर्नेहरू त त्यसै मरे, बाँच्नेलाई बचाउनु हाम्रो अभिभारा होइन र ?’ मनमा आएका यिनै तर्कनाले म मानसिक रूपमा असाध्यै विक्षिप्त भएकी छु । टीभी टुडे टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार एलबी विश्वकर्माको निधनले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल जसरी तातियो त्यसरी नै मेरो मथिङ्गल तातिएको छ । […]
आहुती । विचार । नेकपा (एमाले) को दसौं महाधिवेशन सकेर देशभर जिल्ला अधिवेशन चलिरहेको छ । लाखभन्दा बढी मानिसको सहभागितामा उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुनु भर्खर फुट बेहोरेको एमालेका निम्ति शानदार सफलता हो । आसन्न चुनावको तयारीका सन्दर्भमा एमालेको यो भीडभाड प्रदर्शनले संसद्वादी अन्य पार्टीलाई उकुसमुकुस बनायो होला । त्यसो त अन्य प्रतिस्पर्धी संसद्वादी पार्टीहरूले पनि अब यस्तै […]
मुख्य दलहरूका महाधिवेशनसँगै राजनीतिमा ‘उमेर’ फेरि बहसमा आएको छ । पटकपटक उही व्यक्ति एउटै पदमा दोहोरिन नहुने र निश्चित उमेरपछि राजनीतिबाट संन्यास लिएर युवाहरूका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्ने आवाजहरू बाक्लिन थालेका छन् । के बूढो हुँदैमा राजनीतिबाट संन्यास लिन जरुरी छ ? शरीरले साथ नदिँदा पनि नेतृत्वमा लिसो टाँसिएझैं टाँसिनुपर्ने नै हो वा इच्छाशक्ति र […]
नेपाली पात्रोमा मंसिर विवाहका लागि प्रसिद्ध महिना हो तर २०७८ को मंसिर नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूका अधिवेशन हुने भएकाले अधिवेशनको महिनासमेत बन्न पुगेको छ । किन ती दलहरू मंसिरमा हतार–हतारजस्तो गरेर अधिवेशन गर्दै छन्, त्यो कुरा बुझ्नका लागि नेपालमा राजनीतिक दलहरूको उद्भव, विकास र संवैधानिक विकासक्रमले ती दलहरूमा पारेको प्रभावलाई हेर्नुपर्छ । रोचक कुरा त, नेपालमा राजनीतिक […]
राजनीति एमालेबाट बडीमालिकाको उपमेयरकी उम्मेदवार नन्दा थापाको जीवन संघर्ष यस्तो छ
राजनीति चलनचल्तीका पुँजीवादी र कम्युनिष्ट पार्टीभित्र दलित समुदायको हविगत !
विचार/ब्लग दलित महिलाको प्रतिनिधित्वमा दलहरूको अक्षमता
विचार/ब्लग म प्रश्‍न गरूँ कसोरी ?
विचार/ब्लग इन्धनमा अचाक्ली कर : गरिखाने जनतामाथि अत्याचार